घरभरि मुसा, उडुस, झिंगा र माउसुली भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? भगाउन यी ४ तरिका अपनाउनुस् ! – Everest Pati
घरभरि मुसा, उडुस, झिंगा र माउसुली भएर तनावमा हुनुहुन्छ ? भगाउन यी ४ तरिका अपनाउनुस् !
एजेन्सी – मुसा , झिंगा , उडुस आदिको कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाइंलाई यसबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यो तरिका निकै नै सजिलो छ ।
५) माउसुली: माउसुलीलाई घरबाट भगाउने यो निकै नै राम्रो तरिका हो । ५–६ मयुरको प्वाँखलाई भित्तामा टाँस्नाले केही दिनमै माउसुली गायब हुन्छ । मयुरले माउसुलीलाई खान्छ । यसै कारणले गर्दा छेपारो मयुरको प्वाँख देख्ने बितिक्कै भाग्ने हुन्छ । यदि मयुरको प्वाँख पाउन सक्नुहन्न भने, अन्य चराको प्वाँखलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ।
आज असोज २४ गते शनिबार, कुन राशिलाई कति शुभ? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल!
घना बस्तीमा ठूलो आवाज सहित इन्धन ट्याङ्कमा आगलागी